ZANU PF CONF MUNGAGWA
Zanu PF nhasi yatanga musangano wayo wepagore, weAnnual People’s Conference, dare rayo repamusoro, rePolitiburo richisangana muHarare kuti ritambire magwaro achaturwa pachatanga muzasangano uyu zvizere kuBindura nemusi weChishanu.
Mumashoko avo ekuvhura musangano uyu, mutungamiriri weZanu PF zvakare vari mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vati Zanu PF inofanira kuramba yakabatana kwete zvekuterera vanhu vari kutaura zvisina maturo nechinangwa chekuda kusvibisa nyika.
Vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, Zanu PF inofanira kuramba ichishanda nevanhu kuti ikunde zvikurusei mumatunhu ayakakundwa musarudzo dza2018.
Vati nyika inofanira kudzivirira rusununguko rwayakawana. Vashora nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango zvehupfumi.
VaMnangagwa vatenda dunhu reMasvingo iro rakaita mhemberero dze SADC Anti Sanctions nemusi weMuvhuro.
VaMnangagwa vati zvisinei nezvirango hurumende yavo iri kuvhura maindasitiri mumaruwa sezvayakaita kuMwenezi uko vakavhura indasiriri yekubika doro kubva kumapfura.
Vati mukati memasvondo akawanda apfuura vange vari kuvhura maindasitiri kumaruwa akaita seMwenezi, Mtoko vachiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa kuti vekumaruwa vawane mabasa.
Musangano wanhasi uri kuzeya magwaro achaturwa pamusangano uyu nemusi weChishanu neMugovera kuBindura.
Mangwana Central Committee ichasanganawo muHarare kuti itambire hurongwa wemusangano uchaitwa neChishanu neMugovera.
Bato iri riri kuita musangano uyu paine kurwisana kwanyanya pakati penhengo idzi.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira, VaGibson Nyikadzino, vati nyaya iyi inogona kuzeyeiwa pamusangano sezvo ichikwanisa kukanganisa mabasa ehurumende.
Asi vati musangano weAnnual People’s Conference hausi wekutsvaga vatungamiriri vatsva asi kuzeya kuti bato rakafamba sei uye kuti richafamba sei kusvika gore rinouuya.
Musangano uyu wechigumi nepfumbabwe uchaitwa pamadandemutande uye kuBindura kuchange kuine nhengo dzePolitiburo chete nevamwe vashomanana kozotiwo vamwe vese vachapinda mumusangano uyu vari kumatunhu avo.